Farmaajo oo khudbad 10 daqiiqo ah ka hor jeediyay Gollaha Shacabka | Keydmedia
Farmaajo oo khudbad 10 daqiiqo ah ka hor jeediyay Gollaha Shacabka
Khudbadda Madaxweynaha oo aheyd mid kooban ayuu uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan shirkii Dhuusamareeb 2 iyo kan soo socdo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goordhaweed khudbad kooban ka hor jeediyay xildhibaanada Gollaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoona ka hadlay waxyaabihii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb, iyo kan hadda dhici doono.
“Mudanayaal waxa aan idin kaga mahad celinayaa dadaalada kala duwan ee ansixinta xeerarka muhiimka u ah doorashada dalka iyo kuwa kale oo aad meelmariseen, waa howl iyo waxqabad muuqda oo aad ku tallaabsateen” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Madaxweyne ayaa soo hadal qaaday in uu wax kasto oo ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 2 uu horey u balan qaaday in uu dib kula soo laaban doono Gollaha, islamarkaana la wadaagi doono.
“Gunaanadkii Shirkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb ka dhacay waxa aan ballanqaaday in Gollaha Shacabka oo aasaas iyo sal u ah doorashada la wadaago, sababta aan sidaas u leeyahay waa go’aanka aad gaartaan oo muhiim u ah dalka” ayuu sii raaciyay madaxweynaha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in Gollaha Shacabka ay muhiim u yihiin natiijo kasto oo ka soo baxdo shirka Dhuusamareeb, islamarkaana ay lama horaan tahay in codka lagu celiyo awoodda shacabka, taasoo ula jeeday doorasho qof iyo cod ah in dalka la gaarsiiyo.
“Maanta oo bisha ah 15-ka Agoosto waxaa lagu ballansan yahay in dib la isugu laabto Dhuusamareeb oo laga wada hadlo doorashada iyo geedi socodka, waana muhiim in dadka dib loogu celiyo awooddooda, madaxweynaha oo dalka ugu sareeyo waa ilaaliyaha sharciga iyo dastuurka, waana in la ilaaliyo, maadaama aad tihiin codka shacabka waa in la aqbalo go’aanka aad gaartaan” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaanada Gollaha Shacabka ka balan qaaday in uu wax kasto oo ka soo baxo shirka Dhuusamareeb 3 uu ula soo laaban doono Gollaha si ay kaalintooda dastuuriga ah u gutaan.
"Waxaan idiin caddeynnaya heshiis walba inaan halkan ku soo celiyo heshiis walba oo aan la gaarno dowlad goboleedyada, si kaalintiina dastuuriga ah aad uga gaartaan." ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.